नेपाल डेस्क « Khasokhas Follow @khasokhasmag
Author: नेपाल डेस्क
नेपालमा १८ वर्षमाथिका ३२ प्रतिशत नागरिकले कोभिडविरुद्धको खोपको पूर्ण डोज लगाएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको असोज २१ सम्मको तथ्यांकअनुसार १८ वर्षमाथिका २ करोड १७ लाख ५६ हजार ७ सय
अपडेट–नवनियुक्त मन्त्रीहरुले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीतल निवासमा विशेष समारोहबीच शुक्रबार नियुक्त भएका १६ मन्त्रीहरुलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएकी हुन्। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको
दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकहरुमा पूर्ण खोप पाउने दरमा नेपालले भारतलाई समेत उछिनेको छ। विश्वस्वास्थ्य संगठनको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार प्रति १ सय जनामा पूर्ण खोप पाउने दरमा भारतभन्दा नेपाल अगाडि देखिएको हो। दक्षिणपूर्वी
मासु व्यवसायीहरुले दशैँका लागि खसी तथा बोकाको मासुको मूल्य निर्धारण गरेका छन्। चाडपर्वको मौका छोपी आफूखुसी मूल्य लिनुभन्दा एकरुपता ल्याउन मूल्य निर्धारण गरिएको व्यवसायीहरुले बताएका हुन्। जसअनुसार आन्द्राभुँडीसहितको मासु प्रतिकिलो
वाग्मती प्रदेशमा सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा वृद्धि, उपत्यकामा कति बढ्यो?
काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनको भाडामा वृद्धि भएको छ । वाग्मती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बुधबार काठमाडौँ उपत्यकासहित वाग्मती प्रदेशमा सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा वृद्धि गरेको हो।
कालापानी क्षेत्रमा जनगणना ‘असम्भव’, घर-परिवारको सूचीकरण पनि हुन सकेन
‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ भन्ने मूल नारासहित देशभर १२ औं राष्ट्रिय जनगणना सुरु भइसकेको छ। भदौ ३० देखि असोज १८ सम्म जनगणनाको प्रारम्भिक चरण पनि सकिइसकेको छ। तर नेपाली भूमि
काठमाडौं महानगरपालिकाले दशैंलक्षित खोप अभियान चलाउने
काठमाडौं महानगरपालिकाले दशैंलक्षित खोप अभियान चलाउने भएको छ। असोज २२ देखि २४ गते अपरान्हसम्म १८ वर्षमाथिका नागरिकका लागि कोभिडविरुद्धको खोप दिन लागिएको हो। महानगरका सबै वडाबाट खोप दिइनेछ । यो
नेपालमा कोरोना संक्रमितको दैनिक संख्या घटे पनि देशभर अझै २५ हजारभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा अझै २५ हजार ४ सय ९७ सक्रिय
चीनबाट आइपुग्यो ४४ लाख डोज भेरोसेल, क–कसले पाउने?
चीनबाट कोरोनाविरुद्धको ४४ लाख डोज खोप काठमाडौं आइपुगेको छ। नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडीमार्फत् उक्त परिमाणको भेरोसेल खोप शुक्रबार दिउँसो काठमाडौं आइपुगेको हो। खोप लिन बिहीबार राति वाइडबडी विमान बेइजिङ उडेको थियो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले म्याद सकिएका कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप नलगाएको स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयले शुक्रवार सूचना जारी गर्दै कोरोना भाइरसविरुद्धको म्याद सकिएको खोपको प्रयोग भइरहेको अफवाह फैलिएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै